Iipateni zokuSula zaSimahla zaBasetyhini abaDibeneyo - Plus Size Living
Iipateni zokuSula zaSimahla zaBasetyhini abaDibeneyo
Uninzi lwabasetyhini abadibeneyo baye badimazeka ngenxa yesinxibo esilungeleyo ukunxitywa, ke bajike kwiipateni nakwimishini yabo yokuthunga ukugcwalisa iikhabhathi zabo. Yandisa ikhabethe yakho ngempahla efanelekileyo ngokusebenzisa iipateni zasimahla ezibonisa ubume bakho obugcweleyo kunye namagophe.
Iindawo zoBulungu ezinamaPhatheni aSimahla
Ezi zilandelayo ziziza ezimangalisayo ezibonelela ngokukhululekileyo kunye neepateni zokuthunga ubungakanani kwiindlela ezahlukeneyo. Indawo nganye ifuna ukubhalisela ubulungu basimahla bokukhuphela kunye neepateni zokuprinta. Ubhaliso luthatha kuphela imizuzu embalwa kwaye awabelani ngalo naluphi na ulwazi lomntu siqu.
Ukudibanisa iiPics zeGalari yaBasetyhini
Apho unokufumana khona iingubo zabafazi eziS super Plus
Ukucheba iinwele okufutshane kwabafazi abaDibeneyo
Uhlobo apha ineepateni zokuthunga zasimahla zabafazi abadibeneyo kunye nobukhulu obahlukeneyo beentlobo ezahlukeneyo zesinxibo ngobukhulu be-18 nangaphezulu. Uninzi lweepateni kwisiza zilayishwe ngamanye amalungu kunye noluhlu lobunzima ukusuka kwi-novice ukuya kwingcali. Uya kufumana simahla kunye neepateni zobungakanani beetopsi, iziketi kunye nelokhwe. Iminikelo ihlala itshintsha kwaye ngaphezulu kongezwa mihla le. Jonga kwakhona rhoqo ukuze ubone ukuba yintoni entsha.
Ukufumana iipateni kungena 'simahla kunye nesayizi' kwicandelo lokukhangela. Skrolela ezantsi iziphumo zokukhangela zeendidi apho ixesha lokukhangela likhoyo. Iziphumo ezingaphezulu zingena 'ngeepateni zasimahla' kwicandelo lokukhangela, kuba uninzi lweepateni ezizodwa zinobungakanani obahlukeneyo ukusuka kwincinci ukuya kudibanisa. Uzakufuna ukuhluza iipateni ezingaphezulu, kodwa kunokwenzeka ukuba ufumane iipateni ezinobungakanani obudibeneyo obungadweliswanga phantsi kophando nje lokudibanisa.
Ubugcisa Omnye umthombo omkhulu wasimahla kunye neepateni zokuthunga ubungakanani. Ukongeza ekuthungeni, le ndawo igubungela iindidi ezahlukeneyo zobugcisa. Ubugcisa kulula ukuhamba nabo kwaye banikezela ngeepateni ezahlukeneyo nokuba yeyiphi na indlela yakho okanye inqanaba lokuthuthuzela. Uya kufumana iibhatyi ezenzelwe wena, iilokhwe kunye neetopisi, iilokhwe zentuthuzelo, ishishini okanye itheko kunye neziketi ezingaqhelekanga okanye ezithandwayo.
Emva kokujoyina ubugcisa, uya kuba nokufikelela kuluntu, ukhuphelo lweepateni, iiklasi ezikwi-Intanethi, iiprojekthi, ilayibrari yesalathiso, ukuthengwa kokuthenga kunye nebhlog. Ukufumana simahla kunye neepateni zokuthunga ubungakanani, cofa iipateni phantsi kwethebhu yoluntu kwaye ungene 'simahla kunye neepateni zesayizi' kwibala lokukhangela. Cinezela phantsi ukukhangela kwakho ngokufaka uphawu 'lokuthunga', 'ubungakanani' kunye 'nesimahla' kwikholamu yokuhluza ngasekhohlo. Kukho ezinye iindlela ezikhoyo zokukhawulela, kodwa zingasusa ezinye iindlela eziphambili. Ngelixa unciphisiwe, iziphumo zepateni zisaza kufuna ukuhluzwa ukufumana iipateni ezifanelekileyo kuphando lwakho.
amaretto umuncu ngomxube oswiti kunye nobumuncu
Sula uTina Givens
Sula uTina Givens sisibonelelo ekufuneka ubenaso kwiibhukhmakhi zakho zokuthunga. Uchaza isitayile sakhe njengomnqamlezo phakathi kwe-bohemian, African, Colonial, Victorian kunye ne-1920s yothando. Uyilo lwayo lubekekile, lukhululekile, luyadlala kwaye lububhinqileyo, kwaye iipateni zakhe ziyakhawuleza, zilula iiprojekthi kuye nabani na ukufezekisa iziphumo eziyimpumelelo. Emva kokungena kunye nokungena ngemvume, cofa kwikhonkco leenyosi zasimahla ukuqala ukukhuphela iipateni. Ngelixa zintlanu kuphela iipateni zasimahla ezifumaneka ngeSew Tina Givens, ziipateni eziguqukayo ezinokudityaniswa kunye nokudityaniswa ukwenza iimpahla ezininzi kwiindidi ezahlukeneyo kunye nemibala. Uyakufumana iipateni zasimahla zeebhulukhwe zeebloom, ilokhwe egcwele isiliphu, ilokhwe yethoniki enamacala ahlukeneyo, ilokhwe yeKika eyilelwe ukuba ilingane, kunye nengubo yokuqhakaza enokwahlulahlula ngaphambili efakelweyo.
Musa ukuphazanyiswa bubungakanani obuqala ukusuka kuNcinci ukuya kuKhulu. Obu bungakanani yindlela abhala ngayo iipateni zakhe. Njengoko kuchaziwe kwindawo yakhe, eyona milinganiselo ibaluleke kakhulu yeepateni zikaSew Tina Givens yintsimbi kunye nesinqe. Icandelo ngalinye lenzelwe ukuba libe nendawo. Kuba uninzi lweepateni zasimahla zihamba ngokungafaniyo (ngaphandle kweentyatyambo), sebenzisa umlinganiso wakho wokuhamba. Uninzi lwabesifazane abadibeneyo kunye nobukhulu kuya kufuneka bakhethe ubungakanani be-L, ehambelana ngokulinganayo nemilinganiselo ye-44'-46 '. Kwiibhloko, khetha ubungakanani L ipateni yesinqe 42'-43 '.
Iipateni zokuSula eziNinzi ngakumbi
Kukho indawo ezininzi zokuthunga kunye neebhloko ezonwabileyo ngakumbi ngokwabelana ngeepateni zazo zesayizi kunye nesimahla. Ukuba awukayifumani ipateni efanelekileyo ngoku, khangela kule makhonkco ukuze ufumane iipateni zokuthunga ezikhululekileyo kunye nobukhulu.
Oku kuhle Umgca ophezulu ukusuka Kumgangatho wokusika uya kuba longezo olugqibeleleyo kwiwadi yakho yehlobo, okanye phantsi kwebhatyi oku kuwa. Ifaka i-neckline-neckline neckline kunye neepokots ze-inseam, le patheni ifumaneka kubungakanani be-4 ukuya kwi-22. Le patheni ifuna uziphu omfutshane, kodwa ukuba umtsha ngokufaka enye, le yiprojekthi enkulu ukuziqhelanisa nayo.
Le hoodie enemikhono emfutshane yenziwa kusetyenziswa ijezi yelaphu (cofa kwikhonkco lomfanekiso ukufumana ipateni). Yipatheni elula enika ithuba lokusebenzisa inaliti yamawele. Le patheni ifumaneka ngobungakanani be-4 ukuya kwi-22.
Ipateni emfutshane yemikhono yeeHoody kubungakanani ukuya kuthi ga kuma-22
Ngubani othi kufuneka uthenge ii-sweatshirts ulungele ukunxiba? Yongeza kwiingubo zakho eziqhelekileyo ngale nto sleeve elide raglan phezulu , kwakhona ukusuka kumgangatho wokusika. Inqanaba lesakhono kule patheni lichazwe 'njengomqali othembekileyo' kwaye liyafumaneka kubukhulu be-4 ukuya kwi-22.
Le pateni inomdla yokunxiba ukusuka Isitudiyo esincinci yinto ekufuneka uyenzile kwikhabhathi yakho. Ukukhumbuza isinxibo esincinci-esimnyama, ungayenza, nakweyiphi na imibala oyifunayo. Ipateni ifumaneka ngobungakanani 6 ukuya 22, kwaye iza nezinto ezimbini ezikhutshelweyo, enye yeebhodi kunye netemplate yesiketi sesangqa.
Wonke umntu wasetyhini ufuna isiketi se-maxi kunye nepateni yasimahla kuyo Elula uSimon kunye noC. yeyona uyifunayo. I-PDF iyafumaneka ngobukhulu XS ukuya kwi-XXL. Iprojekthi egqibeleleyo yabasaqalayo kwimijelo ehamba phambili.
Ubusazi ukuba ungazenzela iipenty zakho? Sebenzisa ipateni kwi Umhlali weSeamstress ukuthunga ii-undies usebenzisa ilaphu elinamacala amabini, okanye ukuphinda usebenzise ii-t-shirt zakho ezindala. Le patheni kulula ukuyilandela kwaye iyafumaneka ngobungakanani XS ukuya ku-2X.
Yenza into ethandekayo Isinxibo se-cabana ekulingana ngokugqibeleleyo kunye nokusetyenziswa okulula kwepateni evela kubuNtliziyo bukaJenny. Ulandela ipateni ayibonelelayo, kodwa sebenzisa imilinganiselo yakho, ukuze uyazi ukuba uza kulungela. Isinxibo esihle kunye nesitayile sasebukhosini esinqeni sayo yinkangeleko yokuthopha yobukhulu obudibeneyo, nabo.
Yenza iipateni zakho zasimahla
Ayizizo zonke iipateni ezifuna umshicileli. Uyilo lwakho usebenzisa imiyalelo elula yezi projekthi zilandelayo.
Ngelixa oku umlimi blouse Isifundo esivela ku-Sewing.org asiboneleli ngepateni yokwenyani, inemiyalelo elula necacileyo yokwenza eyakho. Hlanganisa i-blouse usebenzisa enye okanye ezininzi zokulungelelanisa.
I-Bat-wing Tunic ephezulu
Le top-tunic tunic top from Be A Crafter yenye yeepateni (cofa kwikhonkco lomfanekiso ukuze ubone) oya kuyidinga ukuyila usebenzisa imilinganiselo yakho. Ufuna ilokhwe? Yandisa nje ubude. Le projekthi ifanelekile kubaqalayo.
IiKimon ziye zanda ngokuthandwa njengeebhatyi eziqhelekileyo. Uyakujongeka ngathi unxibe oku njengempahla yokunxiba yesikipa kunye nengubo yejean. Zama isifundo semodeli kwi I-Mezzo eyingozi . Yenziwe ngeziqwenga ezisisiseko zoxande oyila ngokwemilinganiselo yakho, le kimono inokugqitywa ngokulula ngokuhlwa.
Hlanganisa kwaye utshatise iipateni
Ngaba unayo iphatheni oyithandayo, kodwa ayinayo i-vogue oyifunayo? Emva kokuba uqokelele unikezelo lweepateni zesayizi yokudibanisa, unokwenza ezakho zoyilo ngokutshintsha iziqwenga zepateni ezinje ngemikhono okanye iikhola. Uya kudinga ukugcina imilinganiselo yakho engqondweni njengoko uguqula okanye ungqengqa imigca, kodwa umphumo uya kuba yingubo yohlobo oluvumela isitayile sakho esikhethekileyo ukuba sikhanye.
Isifrentshi Imbali Gluten Free Recipes Malunga Pregnancy Izinto Zokuthambisa Brands Used Cars
ucoca njani uthuli ezindongeni
Ixabisa malini iikati zase siberian
Ukukhanya kumnyama kumatshini we tattoo uyathengiswa
Ukuze uqhube ngokukhuselekileyo, kufuneka
Nguwuphi umzekelo woxinzelelo?
isipho somtshato sonyana kunye nomolokazana